Brosol - Ezi ntụziaka site na ọkụkọ, minced anụ, anụ ezi, sausages na cheese
Achịcha - uzommeputa maka nri mbụ nke anụ anụ na nsen. Achịcha, na-acha uhie uhie, nke na-adọrọ mmasị na pancakes na-eme ka ihe dịgasị iche iche, dị mfe ma ọ bụ na-ejuputa ọtụtụ, jikwa ọkara ma ọ bụ tụgharịa na-efe na efere na elu ma ọ bụ slicing nke ọhụrụ akwụkwọ nri.
Esi esi esi nri brioche?
Nkwadebe nke briars ga-achọ ka ụfọdụ dexterity, ndidi na obere oge n'efu.
Nri anụcha flavored, na-akụ ma na-ekewa n'ime bọọlụ bọọlụ, bụ nke a na-apụkọta ruo nha nke frying pan n'etiti ngalaba abụọ nke film polyethylene.
A na-akụ nsen, nnu, ude ma ọ bụ mmiri.
N'elu efere dị larịị na-etinye otu akụkụ nke ngwakọta mmanụ, gbanwee gaa na anụ a na-egwupụta nke ọma.
Ntughari ihe na-etinye ihe dị n'ime efere ahụ n'ime ite frying na mmanụ, e ghere eghe n'akụkụ abụọ.
Ejiri akwụkwọ nri, nsị anụ na mgbakwunye nke chiiz, dị iche iche sauces.
Bisol nke anụ a mịrị amị - uzommeputa
Briol, bụ onye a ga-emepụta usoro ntụziaka ya na-eme n'ọdịnihu, na-akwadebe site na anụ ezi-ehi ma ọ bụ anụ ala. Dị ka ihe si esi nri, na mgbakwunye na nnu na ose, ị nwere ike itinye ngwakọta nke hops-suneli ma ọ bụ Provencal herbs. A na-ekwe ka dochie mayonezi na ngwakọta nke utoojoo ude na mọstad, na eyịm green na salad, yabasị.
ike - 400 g;
àkwá - 6 pcs.
mmiri ara ehi - 100 ml;
elu - 1 ụyọkọ;
Mayonezi - 150 g;
eyịm green - 1 ụyọkọ;
nnu, ose, mmanụ.
Wụba àkwá na nnu, ose na mmiri ara ehi.
Nnu nnu, ose, mix na iti ihe, kewaa n'ime òkè, tụgharịa n'ime bọọlụ (6 iberibe).
Gwaa onye ọ bụla na-eje ozi nke anụ a mịrị amị n'agbata ihe dị na fim ahụ, wee burufee na efere nke nwere akụkụ nke akwa ahụ, wụsara ya na pan.
Mix na cucumber sliced, yabasị, elu na garlic na Mayonezi na chiiz.
Eberi na akụkụ abụọ nke mpempe anụ ndị a na-egwupụta anụ, na-emegharị ya na-apụta.
Brioche site na ọkụkọ fillet
Brizol - uzommeputa nke a ga-eji fillet ọkụkọ mee kama ị na-eri anụ, na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe karị, na-azọpụta onwe gị pụọ na mgbagwoju anya ma na-achọ ka ị na-apụ apụ. Ọ dị mkpa na anụ ahụ na-eji ihe eji emepụta ihe na-eji ya eme ihe ma jiri ya na-esi ísì ụtọ.
chicken fillet - 3 iberibe;
ntụ ọka - 40 g;
leeks - 1 ibe;
nnu, ose, herbs, mmanụ.
A na-ebipụ akwụkwọ ndị chicken, gbanwee dịka akwukwo, kụrụ ihe, gbasaa.
Ghichaa 2 àkwá, oge, tinye ya na ntụ ọka ntụ ọka na ntụ ọka ahụ, tinye ya na pan frying, ighe si n'akụkụ abụọ.
Mix Mayonezi, elu, cheese, ighe si leeks na mushrooms.
Juputa na mpe nke ọkụkọ na ngwakọta nke na-esi na ya pụta, na-etinye ya n'ọkara.
Pizza briol - uzommeputa
A na-enweta brizol na cheese gbazere, nke a kwadebere site na anụ ndị anụ ezi, n'otu oge ahụ dị nro, obi, nri na aromatic. Na nju, ọ bụrụ na achọrọ, gbakwunye elu, eyịm erimeri magburu onwe ya ma ọ bụ tinye ya na galik na-emepụta akwụkwọ, ma gbanye ala ma ọ bụ obere shredded obere na blender.
Mayonezi - 120 g;
Gri anu ezi, oge, kewaa ya, wepuo ya.
Ghichaa àkwá, oge, wụnye ya na efere, nke na-etinye anụ anụ.
A na-akpụgharị ihe ndị a na-arụ ọrụ na-agagharị na pan, nke e ghere eghe n'akụkụ abụọ.
Jiri mmanu ezi nke anu ndi ozo na Mayonezi, gbakwunye ya na chi ogwu.
Brioche si azụ
Briol bụ uzommeputa nke a ga-arụ na azụ. N'okwu a, a na-atụ aro ọdịiche nke efere na cod, nke nwere ike iji dochie anya pollock, hake, pike perch. Ọbụna n'emeghị ihe ndị ọzọ, efere ahụ ga-atọ ụtọ na ọnụ mmiri, ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ya na akwụkwọ nri na herbs, cheese na ihendori, ghọọ ihe oriri.
ntụ ọka - 4 tbsp. ngwunye;
ejuputa (nhọrọ) - nụrụ ụtọ;
Tressku kpochara, kpochapụ ọkpụkpụ, gbakọọ fillet ahụ na eyịm ye garlic.
Tinye akwa ahụ, ihe eji eme ihe, tụgharịa akụkụ nke isi dị n'etiti fim ahụ.
Tie akwa ahụ na nnu, ose.
Fry briol si na cod, na-atụba iyak azụ na akụkụ nke egg ngwakọta na-awụkwasị ha n'elu a na-ekpo ọkụ frying pan.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, jikọta ngwaahịa na nri.
Okpokoro na pan, a ga-edozi uzomume ya mgbe e mesịrị, a kwadebere ya karịa ka ọ dị na mbụ, n'ihi nsị dị iche iche nke nchịkọta anụ na anụ, ma nke a anaghị eme ka ihe dị na mbụ. Kama mpempe tomato, a na-ejikarị tomato ihe oriri ma ọ bụ ketchup osere, na kama nke ude mmiri, ezigbo yogọt .
fillet fillet - 500 g;
mmiri 50 ml;
ude mmiri - 300 g;
tomato mado - 50 g;
pickled kukumba - 2-3 pc.;
eyịm - 200 g;
A na-egbutu ụyọkọ nke toki n'ime strata, tie ya ihe, wee debe ya n'ime ibe, ka ọ dị mma.
Gri yabasị na mmanụ, dina anụ, aja aja.
Tinye tomato tomato uto, seasonings, ighe maka nkeji ise.
Were nsen na mmiri, nnu, ose, ighe ke pan egg pancakes.
Otu ọkara nke pancake jupụtara na nri toki, na-agbakwunye kukumba pickled, kpuchie ọkara ọzọ.
Akwukwo nke anu anu, ihe ndi ozo na aro di n'okpuru, adi na nkwekota nke ohuru ohuru, nke a gbakwasiri ike ma obu gbazee cheese, Mayonezi, elu na garlic ma oburu choro. Na nri nwere ike ịgbakwunye otu àkwá maka ederede dị mma.
fillet fillet - 700 g;
tomato - 2-3 pc.;
elu na garlic - nụrụ ụtọ;
Anụ anụ a gbanyere agbacha bụ salted, nke a na-atụgharị, nke a gbakwunyere na àkwá, nke a gwakọtara ma kesaa ya n'etiti fim ahụ.
Mee ka àkwá na mgbakwunye nke nnu na ose.
A na-ejikọta akụkụ ụfọdụ nke ngwakọta ngwakọta ya na n'ígwé anụ, wụsara ya na pan dị ọkụ, browned.
Na-eje ozi briol na tomato, nke a ga-ebipụ, tinye ọkara pancake, na-agbakwunye cheese, Mayonezi na elu. A na-apịa ngwaahịa na ọkara ma ọ bụ tụgharịa site na mpịakọta.
Briquet na mushrooms - uzommeputa
A na-eji ụzụ dị iche iche dị iche iche kwadoro briol na mushrooms, ma maka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ụlọ, nke na-atụ ụjọ na ị na-akwagharị anụ, ọ pụrụ ịbụ ihe na-asọ oyi. Dịka nri anụ, ị nwere ike iji anụ ezi, anụ ehi, ọkụkọ ma ọ bụ toki, ma na-eji mushrooms dochie anya anụ ọhịa, buru ụzọ mee ha.
ike - 500 g;
àkwá - 8 iberibe;
mmiri ara ehi - 200 ml;
Mayonezi - 6 tbsp. ngwunye;
nnu, ose, herbs, dil, mmanụ.
Whisk nsen na mmiri ara ehi, tinye nnu na ose, akpọọ nkụ egg pancakes, ekwe ka ha jụụ.
Ngwakọta ihe dị ntakịrị na-atọ ụtọ, na-agbakwunye ntakịrị mmiri ara ehi, gbasaa na pancakes, si n'elu gbasaa oyi akwa nke Mayonezi na dil na garlic.
Na-ere ngwaahịa ndị a na-etinye na mushrooms, jiri aka na-apụta na akpọọ nkụ n'ụdị na oven maka minit 20.
Bisol na soseji na cheese
Mfe ma dị mfe na naanị nkeji ole na ole, ị nwere ike ịkwadebe ụra maka nri ụtụtụ, na-agbakwunye akwa egg kpọmkwem na pan frying, sliced ​​sousage and cheese grated. Enwere ike ichikota Mayonezi na ngwakọta nke anụ ahụ na ude mmirimmiri, ude ma ọ bụ nanị mmiri ara ehi, ma jikọta efere ahụ mgbe frying ma ọ bụ na-eje ozi na elu ma ọ bụ akwụkwọ nri ọ bụla.
soseji - 1 ibe;
Mayonezi - 1 st. ùkwù;
Mee ka àkwá na nnu, ose na Mayonezi gbanye n 'okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ na butter.
A na-etinye ọkara nke omelette na soseji na ịkụcha cheese na akpa.
Otu nkeji mgbe e mesịrị, kpuchie njuputa na ọkara nke abụọ ma ghee briol na soseji maka nkeji 2 n'akụkụ ọ bụla.
Agụụ briol - uzommeputa
Enwere ike iji ya mee ihe na-esi ike ya, nke dị iche na nke a chọrọ. Achịcha nwere ike dochie anya zucchini eghe ma ọ bụ eggplant ma ọ bụ ngwaahịa mkpọ, na ude mmiri na mọstad na Mayonezi. Na-efere efere naanị n'ụdị na-ekpo ọkụ, na-ekesa ihe ọkụkụ a kụrụ nke ọma.
Nri anu - 200 g;
àkwá - 4 iberibe;
ndị ọkachamara - 200 g;
mmiri ara ehi - 40 ml;
Mọstad - 1 teaspoon;
nnu, ose, elu, mmanụ.
A na-akụ nsen, nnu na mmiri ara ehi, tinye ala anụ, nwuo na akpọọ nkụ 2 pancakes.
Ighe ọka na mmanụ, dị jụụ.
Gbakwunye osisi cucumber, cheese, ude mmiri, mọstad, bido, juputa na oju ocha.
Breeze na oven
Na-edozi ma dị mfe iji dozie anụ nke minced anụ na oven. Na nju anụ nwere ike ịgbakwunye, ma ọ bụrụ na achọrọ ya, nnukwu ogwe, cheese chiri sie ike, mpekere akwụkwọ nri na-esite na ya, na-eme ka e nwee ihe oriri. Ị nwere ike ijere efere na nri ọhụrụ, herbs na ihendori.
mmiri ara ehi - 150 ml;
Were àkwá na mgbakwunye nke mmiri ara ehi, nnu na ose, akpọọ nkụ pancakes sitere na isi ihe.
Gwakọta ihe ndị ahụ na chopped chopped, podsalivayut, ose.
Dụnye ngwakọta na egg pancakes, n'ogige atụrụ na-apụta na tinye ha na ebu.
A na-eziga blọọkụ ka akpọọ nkụ na oven maka minit 25.
Brosol ke multivark
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ multi-cook, ị nwere ike ịme ya na-atọ ụtọ na briol. Ndị na-esonụ bụ ụdị dị iche iche nke na-ejuputa na akwụkwọ nri ndị ọhụrụ, nke a ga-eji doonnaise, cheese na herbs ọhụrụ, dochie ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-atọ ụtọ.
cucumbers na tomato - 2 PC.
A na-ekewa ihe eji eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche, nakwa dị ka àkwá a gwakọtara na nnu na ose.
Akuku nke nri tinye n'ime ngwakọta akwa, tinye na nnukwu efere na mmanụ, gbadaa ala iji nweta achicha dị nro, wụsara ya na àkwá, esiri ya "Bake" ka ọ daa na abụọ, na-atụgharị ya na eriri abụọ.
Greases pancakes na Mayonezi na garlic, mejupụtara tomato sliced ​​na cucumbers.
Na-arụ briol na akwụkwọ nri na efere na elu.
Burmese si mmiri ara ehi ntụ ntụ - uzommeputa
Nri ofe na croutons
Mmiri ara ya
Esi esi esi nri na ogwu?
Chocolate fondant - Ezi ntụziaka nke dessert French na-enweghị atụ
Pizza 4 mmiri vaịn - uzommeputa
Celery na Korea
Dried Polenta - Ntụziaka
Pita achịcha na soseji
Osisi nke ugu osisi - crafts
Ubi ụdọ nwere arịa atọ
Nri - nri "Mmegide" - menu maka ụbọchị 7
Hydrocortisone anya ude
Kedu ihe dị iche n'etiti tan na ayran?
Kedu mgbe ụmụ kittens na-agbanwe ezé nwa ha?
Kedu ihe onye a hụrụ n'anya nrọ banyere?
Akwa edemede - ihe ị ga-eme?
Ịgba ụgwọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara
Gịnị mere eji akwa uwe?
Puff pastry na ọkụkọ
Ime afọ iri abụọ na anọ - mmepe nwa ebu n'afọ
Achịcha ọka na jam